10 Fasaxyada Fasaxa Ugu Fiican Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Fasaxyada Fasaxa Ugu Fiican Yurub
Qalcaddii dhexe, canab ah, Bbc breathtaking, waa uun waxyaabo dhawr ah oo ka dhigaya Yurub kuwo kaamil ah fasaxa dayrta. Magaalo kasta oo Yurub ku taal waxay leedahay soo jiidasho, laakiin meelaha ay ku socdaan anaga 10 fasaxyada ugu wanaagsan ee liiska Yurub waa kuwa aad u yar meelo qurux badan.
Yurub waxay si gaar ah u yaab badan tahay deyrta marka geedaha iyo buuraha lagu rinjireeyo oranji qafiif ah, casaan kulul, iyo jaale. Dabayaaqadii Oktoobar, waxaa jira dad tiro yar wadooyinka, taas macnaheedu waa inaad heshid aragtiyada deyrta quruxda badan naftaada oo dhan. Dayrtu waa waqti u wanaagsan safarka sababta oo ah hudheelka iyo qiimaha safarka ayaa si weyn hoos ugu dhaca.
Way fududahay oo raaxo badan tahay inaad u safarto dhammaan meelaha cajiibka ah ee liistadayada tareenka ah. Laga soo bilaabo dooxada Loire ee Faransiiska ilaa Luxembourg, Safarka tareenka waa mid ku habboon qorsheynta fasaxa deynta ee aadka loo xasuusto ee Yurub oo ay ahayd inaad taariikhda ku dhigato.
Safarka Tareenka waa mid aad u sahlan oo Waddada Saaxiibtinimada leh ee loo Safro. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Tigidhada Tareenka ee ugu jaban Websaydhka Adduunka.
1. Fasaxa Deyrta ee Umbria, Italy
In kasta oo qaar badani door bidaan Tuscany fasaxa dayrta ee Yurub, Gobolka Umbria ee dalka Talyaanigu waa mid aad u cajiib badan oo ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu safro safarada Yurub iyo Talyaaniga.
Si fudud ayaa looga heli karaa tareenka ka Rome, Umbria waxay ku yaboohdaa dad tiro yar iyo qiime guryo jaban oo Talyaani ah. Dabayaaqadii Sebtember ilaa Oktoobar, you can enjoy the white truffle and new wine festival in towns like Gubbio. Sidoo kale, Waxaad u tegi kartaa Perugia si loo qabto dabbaaldegga sannadlaha ee Eurochocolate. Sidaas, Umbria waxay dhamaanteed ku saabsan tahay naftaada inaad ku garaacdo meelaha waaweyn, ku raaxayso cuntada iyo khamriga ugu fiican inta lagu jiro fasaxa deyrtaaga ee Yurub. Inta lagu guda jiro safar gaaban ama dheer, waxaad ku nooshahay meel boosta-jacaylku jecel yahay, mid ka mid ah meelaha fasaxyada ugu wanaagsan Yurub.
Florence ilaa tigidhada Orvieto
Siena ilaa tigidhada Orvieto
Tigidhada Arezzo illaa Orvieto
Tikidhada Perugia ilaa Orvieto
Sawirada khadka tooska ah cadaalad kuma sameeyaan sixir Cinque Terre gobolka Talyaaniga. Guryaha midabka leh ee buuraha dushooda ku yaal, hareereeyeen beero canab ah, makhaayadaha maxalliga ah, iyo wadooyinka hortayada, dhammaantood waxay ka dhigaan gobolkaan socdaal cajiib ah safarka Yurub. Cinque Terre dhab ahaantii waxay ka kooban tahay 8 tuulooyinka yaryar iyo tareen tareenka isku xira dhamaantood. Tani waxay si gaar ah u sahleysaa inaad booqato mid kasta oo ka mid ah tuulooyinka ku yaal 2-3 maalmo hadaad gaaban tahay. Maxaa ka fiicnaan kara tareenka ku boodbooda mid ka mid ah meelaha ugu fiican Yurub dayrta?
Cinque Terre sida caadiga ah waa meel kulul oo xagaaga loogu talagalay xeebaha iyo biyaha barafka ah. Si kastaba ha ahaatee, aad ayey ufiican tahay inaad booqato dayrta, maxaa yeelay waddooyinka cidhiidhiga ahi way ka madhan yihiin dalxiisayaasha. Sidaa darteed, halka maqaayadaha badankood ay xiran yihiin, waxaad wali heli laheyd bar furan oo ka fiirsaneysa badda oo aad uheli karto aragtida deggan xasilloonida.
Waad bixin kartaa 4 maalmood sahamin tuulooyinka oo ay ku qaataan fasax usbuuc dhammaad leh magaalada La Spezia, halka aad ka bilaabeyso safarka tareenka ee Cinque Terre. Laga soo bilaabo La Spezia, waxaad tababar ku bixisaa tuulo kasta oo aad dooratid.
La Spezia ilaa tigidhada Manarola
Riomaggiore ilaa tigidhada Manarola
Tikidhada Sarzana ilaa Manarola
Levanto ilaa tigidhada Manarola
3. Harada Lugano, Switzerland
Kala daadashada biyaha turquoise, guryaha midabka leh ee terracotta, harada Lugano ee Switzerland waa mid ka mid ah safarada ugu sarreeya ee aan ku tagno Yurub. Switzerland waxay leedahay meelo badan oo layaab leh oo loogu talo galay fasaxaas aan la ilaawi karin ee Yurub isla markaana Lugano ayaa kamid ah waxyaalaha dahabiga ah ee Switzerland..
Heerkulku wali wuu kulul yahay badhtamaha Oktoobar, si aad u fadhiisan kartaa harada adoo ku dhex jira galaas khamri khamri laga soo qaaday beero canab ah ama dhadhamin polenta fuud ee xafladda dayrta dhaqameed. Haddii aad xiisaynayso inaad ku darto waxoogaa farxad ah iyo kaftan ah fasaxaaga deyrta ee Yurub, you can hike up Monte Bre. Muuqaallada laga soo qaaday meesha ugu sarreysa waa qaar ka mid ah aragtiyaha xiisaha leh ee Lugano Bay.
Magaalada Old ee Lugano waxay leedahay guryo-magaalo oo midabo leh, 10 labajibaaranayaasha, iyo dariiqa raaxada leh Via Nessa. Sadarka hoose, Harada Lugano waa u fiican labada dabeecadood ee jecel-dabiiciga ah iyo kuwa quruxda badan ee nolosha jecel. Harooyinka Lugano waa meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay nasashada nasashada ee toddobaadyada gaaban ama fasaxa dheer ee Yurub.
Waxaad si sahlan ugu safri kartaa harada Lugano adoo tareenka ka imanaya Milan Central wax kayar saacad ka yar. Tareenadu waxay saacad kasta ka baxaan xarunta tareenka ee Milan.
Tilmaamaya tigidhada Zurich
Tigidhada Lucerne illaa Zurich
Lugano tigidhada Zurich
Geneva ilaa tikidhada Zurich
4. Fasaxyada Xilliga Fasaxa ee Hannover, Germany
Hannover waa magaalada ugu dadka badan Jarmalka, laakiin mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu talo galay fasaxa dayrta ee Yurub. Magaaladan weyn waxay hoy u tahay baarkin weyn, laba jibaar baaxadda Central Park ee New York. Ancient oak trees and a haro qurux badan waxay ku yaalliin garoonka beeraha, ku habboon socodka iyo dayrrada caajisnimada dayrta.
Dhismaha Oldt Marktplatz iyo waardiyaha saacaddu waa meel wanaagsan oo lagu bilaabayo in lagu ogaado qaab dhismeedka Gotik. Waad usii gudbi kartaa hoolka wanaagsan ee New Town Hall, dhisme-weyn oo-boqortooyo u eg-oo dhaafsiinaya haro. Dhulka cagaaran iyo geedaha ayaa ku wareegsan qasriga weyn waxayna buuxiyaan jawiga weyn iyo muuqaalka midabada dahabka ah.
Hannover waa mid ka mid ah waxyaabaha qaaliga ah ee Jarmalka mana noqon karo mid laga yaabo inuu dego dayrta. Haddii aad qorsheynayso fasaxa deyrta ee Yurub, markaa Hannover waa meesha ugu wanaagsan ee safarka loo aado. Dalxiisayaal badan maahan sixirkooda wali, sidaas darteed, waxaad noqon kartaa kan ugu horreeya ee noloshaada ku leh magaalada.
Bremen ilaa tigidhada Amsterdam
Ku ogow tigidhada Amsterdam
Bielefeld ilaa tigidhada Amsterdam
Hamburg ilaa tigidhada Amsterdam
5. Albaabada Bavaria iyo Duurka Madoow, Germany
The Hawdka Madowga iyo Bavaria waa xulasho caan ah fasaxa qoyska deyrta ee Yurub. Gobolkan layaabka leh ee Jarmalka ayaa ah mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu safro safarka Jarmalka.
Markii aad ka degto tareenka mid ka mid ah tuulooyinka qurux badan, Waxaad isla markiiba dareemi doontaa inaad si toos ah ugu dhaqaaqday sheeko Walaac Grimm. Harooyinka xiisaha leh, Waterfalls-ka Triberg, dooxooyinka cagaaran, iyo beeraha canabka ah waxay dammaanad qaadayaan fasaxa dayrta ee aan la ilaawi karin ee Yurub.
Caleenta midabkeedu wuxuu u beddelaa codad dahab ah, halka dhinaca dambe ay jiraan buuro baraf leh. Ku-nasashada qol alwaax ah ka dib markii aad u weyn oo ka socda Alps waa khibrad aan la ilaawi karin. Sidoo kale waad booqan kartaa mid ka mid ah 25 qalcadaha aagga iyo Neuschwanstein Castle waa qalcad aad u wanaagsan oo lagu sahamin karo fasaxaaga deyrta ee Yurub.
Offenburg ilaa tikidhada Freiburg
Stuttgart illaa Freiburg tigidhada
Leipzig illaa tikidhada Freiburg
Nuremberg ilaa tikidhada Freiburg
6. Fasaxa Deyrta ee Ahornboden, Austria
Dooxada Rissbachtal iyo Karwendel Alpine Park, waa safar aad u qurux badan oo safarka Australia ah oo loogu talagalay fasaxa deyrta. Dhulka Alpine ee Ahornboden wuxuu leeyahay 2,000 sano jir geedaha Sycamore-Maple oo u muuqda si layaab leh labiskooda deyrta ee dahabka iyo oranjiga. Dabeecadda iyo buuraha waxay abuuraan muuqaal aad ufiican oo cajaa’ib leh oo loogu talagalay socdaal lagu xasuusto oo ku soo dhaca Yurub.
Gobolkan Tirol waxaa si gaar ah loogu talinayaa rookaha buurta iyo socod lugaynaya. The park qaranka waxay leedahay duulimaadyo waaweyn iyo raadad badan oo ka mid ah buuraha dhagxaanta u ah fasax aan la ilaawi karin oo Yurub ah.
Salzburg waa uun 3 saacadood ka fog Ahornboden tareenka, oo ay ku jiraan wareejinta. Intaa waxaa dheer, Waxa jira heshiisyo hoteel oo waaweyn iyo xulasho hoy oo ku yaal Grosser Ahornboden inta lagu jiro xilliga fasaxa.
7. Fasaxa Deyrta ee Loire Valley, France
The Loire Valley wuxuu ku yaal gobolka khamriga ee Faransiiska. Taas macnaheedu waa in 185,000 acres oo canab ah oo gubtay dahabka dhammaadkii Oktoobar. Sidaa daraadeed waa meelaha ugu quruxda badan ee lagu booqdo Yurub iyo meelaha loo aado socdaalka fasaxa ee xiisaha leh.
In kasta oo dad badani a safar-maalin ka socda Paris, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad joogtid usbuuc dheer oo kuyaal Loire Valley si aad si buuxda ugu qanciso sixirkeeda iyo quruxdeeda. Sidan, waxaad booqan kartaa mid ama labo ka mid ah qalcadaha cajiibka ah ee dooxada, sida Chateau de Chambord. Qaar baa dhahaya qalcaddan cajiibka ah waxaa dejiyay De Vinci laftiisa.
The Qolka Chambord waa 2 hours south of Paris and you can train travel from Paris Austerlitz to Blois-Chambord. Within an hour and a half, Waxaad ku wareegi doontaa guriga wanaagsan.
Paris ilaa tikidhada Strasbourg
Luxembourg tigidhada tikidhada Strasbourg
Nancy ilaa tikidhada Strasbourg
Basel ilaa tikidhada Strasbourg
Majirto wax qurux badan oo jacayl ah oo ka badan kan Faransiiska dayrta. Bordeaux waa magaalo Faransiis ah oo hoosaad u ah waxayna hoy u tahay beeraha canabka ah ee Saint-Emilion iyo xeebaha Arcachon, Kuwani 2 boosasku waa dhowr ka mid ah sababaha kugu kalifay inaad jacayl ku dhacdo Nouvelle Aquitaine oo ku taal Bordeaux. daaraheeda waaweyn, Tours khamri, daaweynta spa, iyo casharada karinta, ka dhig Bordeaux meel safar qurux badan u safarkaaga fasaxa.
Dabayaaqadii Oktoobar badidood dalxiisayaal waxay ku noqdeen guryahooda, sidaas awgeed qiimaha iyo safarka iyo hoyga ayaa hoos ugu dhacay Bordeaux. Wakhtigan canabku waxay bilaabaan goosashada canabka oo waad joogi kartaa mid ka mid ah wada sheekaysiga badan ee deegaanka iyo qanjaruufo. Tani dhab ahaantii waxay ku dari doontaa a waayo-aragnimo u gaar ah aad album fasaxa sawirkaaga.
Gobolku waa wax weyn in la gaaro tareen meelkasta oo France ah, oo waxaa jira toos tareenada-xawaaraha sare laga bilaabo Paris-Austerlitz iyo Montparnasse saldhigyada tareenka.
La Rochelle ilaa tigidhada Nantes
Toulouse ilaa tigidhada La Rochelle
Bordeaux illaa tigidhada La Rochelle
Paris ilaa tigidhada La Rochelle
9. Fasaxyada Dayrta ee Paris, France
Fasaxkeena fasaxa ugu wanaagsan ee liiska Yurub ayaan noqon doonin mid dhammaystiran la’aan la’aanteed Paris. Paris had iyo jeer waa fikrad fiican, laakiin gaar ahaan waa jaceylka dayrta. Luxembourg Gardens, kafateeriyada yar yar ee Faransiiska, iyo muusikada wadada tooska ah waxay abuuraan goob fiican oo loogu talagalay fasaxa aan la ilaawi karin ee Yurub.
Caan shukulaato kulul ama daawan xuska goosashada miraha Montmarte, Magaalada Paris waxay leedahay meelo badan oo qurux badan oo loogu qurxiyo sawiradaas xiisaha leh. Meelaha ugu badan ee sawiradu waa Jardins du Luxembourg, Parc Monceau, iyo Jannooyinka Tuileries. Laga soo bilaabo dhammaadka Oktoobar, Waxaa jira dabaaldegyo sanadle ah oo lagu qabto meelaha kaladuwan ee magaalada muusikada, dhaanto, iyo jilitaanka fanka. Sidaas, ha ahaato roob ama qorax, Paris waxay bixisaa waxyaabo badan oo weyn oo la sameeyo.
Magaalada Paris waa dad aad u buuq badan isla markaana qiimaha safarka ayaa ah mid la awoodi karo xilliyada fasaxa ka dib, sidaa darteed safarka tareenka iyo hoygu waxay Paris ka dhigayaan safar safar aad u wanaagsan oo fasax Yurub ah.
Xilliga gu'ga, tulipsku waxay qurxiyaan jardiinooyinka iyo beeraha nasashada ee Amsterdam, laakiin dayrta, oranji, midabka caleenta huruudka ah iyo guduudka kanaalka iyo jidadka. Amsterdam waa qurux dhammaystiran sidaa darteed waa mid ka mid ah meelaha fasaxa xagaaga ugu fiican Yurub. Waxaad ku dhex mari kartaa Amsterdam kaliya 3 maalmood, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad sii dheeraato oo aad istaagto gees walba si aad uga mahadceliso aragtida quruxda badan.
Amsterdam waa magaalo cajiib ah oo fasax ku ah Yurub, la 50 madxafyada magaalada, raacid doon kanaallada, Waxa jira waxyaabo badan oo cajiib ah oo laga sameeyo safarkan cajiibka ah ee safarka dayrta ee Nederland. Intaa waxaa dheer, waxaa jira jardiinooyin yaab badan meeshaad ka heli karto faneed ama bushkuleeti ku wareeji haddii hawadu fiican tahay.
Amsterdam waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub, laga heli karo tareen meelkasta oo kamid ah wadamada dariska ah, waana sahlan tahay in lagu dhex socdo magaalada dhexdeeda.
Bonus: Fasaxa Deyrta ee Luxembourg
Belgium, France, iyo Jarmalku waxay hareereeyaan dalka yar ee Luxembourg, meesha ugu safarka safarka dayrta ee Yurub. Magaalada Luxembourg waxaa loogu yaqaan Magaaladeeda Old, waxay ku taallo dhagaxyo waxaana ku hareereysan qalcad dhexe. Qaab dhismeedkeedii cajiibka ahaa iyo soo jiidashadii dunida hore ayaa ku muteysatay cinwaanka dhaxal ahaan dunida UNESCO site. Grand Ducal Palace iyo Adolph buundooyin waa in lagu arkaa meelaha fasaxa lagu tago ee Luxembourg.
Jardiinooyinka iyo aragtida badan waxay bixiyaan aragtiyo raaxo leh ee magaalada oo dhan iyo nawaaxigeeda. dayrta aragtida ayaa si gaar ah u qurux badan midabyada dayrta. Sidaas, halka Luxembourg ay tahay magaalada ugu yar Yurub, Waxay ku faantaa dhinaca kale ee magaalooyinka waaweyn sida Paris. Xaqiiqdi waa runtii in lagu xusho Luxembourg fasaxaaga Yurub ee deyrta.
Thanks to adeegyada tareenka horumarsan, Waxaad u safri kartaa meel kasta oo Yurub ah waqti la'aan. Laga soo bilaabo magaalada weyn ee isku-dhafka ah ilaa magaalada yar ee la yaabka lahaa, magaalo walbana annaga ayaa saaran 10 magaalooyinka ugu fiican ee fasaxa dayrta ee Yurub, has its unique charm and magic.
Antwerp tigidhada Luxembourg
Tigidhada Brussels iyo Luxembourg tigidhada
Tikidhada Metz ilaa Luxembourg
Tigidhada Paris ilaa Luxembourg
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tikidhada tareenka ugu raqiisan meel kasta oo meelaha qurxoon ee taga liistadayada.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Fasaxyada Fasaxa Ugu Fiican Yurub” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-fall-vacations-europe/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
10 Talooyin Sida loo abaabulo shandadaha Hand Your